Home > Travel Europe > Easter n'Ememe Na Europe Ị gaghị agbaghara
Easter n'Ememe Na Europe Ị gaghị agbaghara
Train Travel France, Train Travel Holland, Inzọ Njem Italytali, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 02/05/2020)
Ista ememe na Europe iche site mba na site n'obodo rue obodo. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị dị ịrịba ama na ndị kasị ochie ememme nke Christian Church. Ista bụ ememe nke mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst si n'ílì.
The ememe ụbọchị n'ihi na Ista na-agbanwe kwa afọ. Ọ na a na-eme ememe ke akpa Sunday mgbe ọnwa na-esonụ n'oge opupu ihe ubi. Ọ na-adị n'oge dị iche iche n'afọ ọ bụla, sitere na na mbubreyo March mbubreyo April.
na Christianity, Holy Week bụ izu tupu Ista na-agụnye Sonde Ọmụ nkwu, Maundy Thursday, Good Friday na Holy Saturday. na Europe, ọtụtụ mba ememe Ista site ọkụ nnukwu ọkụ na-akpọ mgbe ụfọdụ Judas ọkụ. Ná mmalite, ndị a bonfires pụtara usọrọ mbata nke mmiri. Ebe a bụ a ngwa ngwa anya na otú ụfọdụ nke ọkacha mmasị gị na mba Europe ememe Ista.
Malite Easter na The Netherlands
na Holland, preparations maka Ista na-amalite a ụbọchị tupu Rịọtaara. Nke a ụbọchị a maara dị ka "Vastenavond" ma ọ bụ Fast Eve. N'oge a, The Netherlands arụ kasị dị ịrịba ama anya nke mba ọzọ ndị njem nleta na ndị chọrọ na-eri na ha ememe.
People ịga chọọchị n'ihi na Ista ọrụ nke na-eso ya na a festive nri. Kids gaa na egg hunts na search of gbaa mma sie nsen ma ọ bụ chocolate àkwá. nwe Tikken bụ a mmasị Ista egwuregwu ebe ndị mmadụ kụrụ aka àkwá ọnụ. Ihe mgbaru ọsọ nke egwuregwu bụ ịgbawa onye nke ọzọ egg enweghị agbasa gị.
Antwerp ka Breda Ụgbọ oloko
Antwerp na Utrecht Ụgbọ oloko
Easter n'Ememe na France
The French ememe Ista site na ịga a pụrụ iche na chọọchị ọrụ, a festive nri, na ihe Ista egg ichu nta. Ị ga-ahụ ụlọ ahịa na bakeries na chocolate òké bekee, hey, na ihe ịrịba ama nke spring.
The French nwekwara n'anya chocolate àkwá, iji ha n'ọtụtụ ebe maka ụmụ Easter egg hunts. The French na-enwe ihe egg-Rolling mpi nke na-agụnye inyefe ndu àkwá ala a mkpọda. E nwekwara a ụmụ egwuregwu na-agụnye-amapụtakwa ọhụrụ nsen na ikuku. Nke mbụ na-agbaji ihe egg na-ekpebisi ike na emeriri onye ga-enye ụfọdụ n'ime ha swiiti na nwa ọzọ.
Ihe na-akpali Easter omenala na France bụ cloches volantes ma ọ bụ "na-efe efe hey." Ọ dịghị ụka hey mgbanaka n'etiti Friday na Ista Sunday ụtụtụ. Ọ bụ nanị mgbe Ista Sunday chọọchị ọrụ na hey mgbanaka, adia mbilite n'ọnwụ Jizọs. France na-mara maka ya n'obe reenactments.
Easter n'Ememe na Italy
Ista na Italy e zoro aka na site na ndị Ịtali dị ka La Pasqua. N'adịghị ka ndị ọzọ mba Europe, ị gaghị ahụ Easter oke bekee ma ọ bụ Ista egg hunts na Italy. Nke a na-enye ọṅụ ememe bụ ihe niile banyere ndị m hụrụ omenala.
Religious processions na-enwe na Italian obodo na obodo nta na Friday na Saturday tupu Ista. Na Ista Sunday, na-atụ anya na nri na-egwu a dị ịrịba ama ọrụ na ememe. Ọ bụ ọdịnala maka mmemme ahụ gụnyere artichokes na Angelino ma ọ bụ nwa atụrụ a roara n'ọkụ ma maka ndị buru oke ya bụ Ewu bụkwa nke a na-egosi. Na mmadụ na-enye nduru ekara ma ọ bụ okpueze ekara nri dị ka onyinye.
na Rome, a vigil na-eme na St. Peter nnukwu ụlọ ụka Senti on Holy Saturday. Ọ na-amalite na 9 pm na-aga na ruo etiti abalị dị ka ọ na-eweta na mmalite nke Easter ụtụtụ. Na Ista Sunday, ndị kasị echere uka-amalite na Pope na-anapụta a ngọzi na ihe owuwu ụzọ mbata.
N'ihi na nke Pope na Vatican, Rome bụ a na-aga n'ihi na Ista bụ ememe na Europe. Ndị si n'ụwa nile na-ekere òkè na ememe na-aga Vatican Sonde Ọmụ nkwu uka. N'ihi na ọ bụ free, ya nwere ike inwe ezigbo mmadụ jupụtara.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga Easter uka na Rome, ọ kacha mma ka akwụkwọ gị tiketi n'oge. Akwụkwọ gị oche n'ọdịnihu na-enwe ndị kasị mma udu. N'ihi na nke ewu ewu na nke Ista ememe na obodo ndị dị ka Rome, Paris, na Amsterdam, ọ bụ mgbe niile maara ihe ka atụmatụ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feaster-festivities-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#Ememme Ista europetravel longtrainjourneys Atụmatụ trainjourney Tranride traintip Train Travel travelfrance nje ndi njem